सुनको मूल्य नयाँ वर्षकै उच्च विन्दूमा, चाँदी पनि उक्लियो Bizshala -
स्याङयोङ मोटर्सको नव वर्ष अफर : गाडी खरिदमा रु. ५ लाखसम्म क्यास डिस्काउन्ट
सुनको मूल्य नयाँ वर्षकै उच्च विन्दूमा, चाँदी पनि उक्लियो
काठमाण्डौ । पहेँलो धातु सुनको मूल्य नयाँ वर्ष २०७३ कै सबैभन्दा उच्च विन्दूमा पुगेको छ ।
मंगलबार सुन प्रतितोला ५५ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । नयाँ वर्ष लागेपछि सुनको मूल्य यति महंगो भएको थिएन ।
बैशाख २ गते सुनको भाउ प्रति तोला ५४ हजार ५ सय कायम भएको थियो । त्यसपछि सुनको भाउमा सामान्य वृद्धि मात्र भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको चाँदीको मूल्यमा तीव्र वृद्धिले सुनको मूल्यलाई खासै प्रभाव पार्न सकेको थिएन । बैशाख ६ गतेसम्म सुनको भाउ प्रति तोला ५४ हजार ५ सय नै कायम भएको थियो । बैशाख ७ गते तोलामा १ सय मूल्य घटी ५४ हजार ४ सय कायम भएकोमा बैशाख ८ गते एकैदिन प्रति तोलामा ६ सय बढी सुनको भाउ ५५ हजार पुगेको थियो । यो मूल्य बैशाख १० गतेसम्म जारी रह्यो । बैशाख १२ गते २ सय रुपैयाँ घटेर सुन प्रति तोला ५४ हजार ८ सयमा कारोबार भएको थियो । सोमबार तोलामा १ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ ५४ हजार ९ सय कायम भएकोमा मंगलबार नयाँ वर्षकै उच्च विन्दू अर्थात तोलामा २ सय रुपैयाँले बढेर ५१ हजार १ सय कायम भएको हो ।
विवाहको मौसम, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धिमा गतिमै भए पनि बढिरहेको मूल्यका कारण बैशाख महिनाभरिमा सुनको भाउ अझै माथि जानसक्ने विश्लेषकहरुको आँकलन छ ।
पुरानो वर्ष २०७२ को अन्तिम महिना चैतमा सुनको भाउ प्रति तोला ५५ हजार ८ सय सम्म पुगेको थियो । त्यसअघि सुनको भाउ तोलाकाो ५६ हजार ५ सयसम्ममा कारोबार भएको थियो ।
यसैबीच, लगातार चमात्कारिक ढंगले वृद्धि भइरहेको चाँदीको मूल्य मंगलबार तोलामा ५ रुपैयाँले वृद्धि भई तोलाको ७ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको छ । बैशाख ८ गतेदेखि तोलाको ७ सय ७५ रुपैयाँको दरमा चाँदीको किनबेच भइरहेको थियो । त्यसअघि बैशाख २ र ३ गते ७ सय ४५ र ५, ६ र ७ गते प्रतितोलाको ७ सय ५० रुपैयाँको दरले किनबेच भएको थियो । ८ गतेदेखि भने तोलामा एकैदिन २५ रुपैयाँले चाँदीको मूल्य बढेको थियो । चाँदीको मूल्य समेत अझै माथि उक्लिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
सुनको भाउ बढ्यो, चाँदीको स्थिर
काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनको भाउ उकालो लाग्ने क्रम...
सुनको भाउ फेरि रु. ९० हजार माथि, चाँदी पनि बढ्यो
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको भाउ उकालो...
सुन रु. ३०० ले महँगियो, चाँदीको भाउ पनि बढ्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज बिहीबार उकालो लागेको छ। नयाँ वर्ष २०७८ को...
वर्षको अन्तिम दिन घट्यो सुनको भाउ, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाण्डौ । यो वर्षको अन्तिम दिन आज मंगलबार (चैत ३१) गते सुनको भाउ...
सुन रु. ४०० ले सस्तियो, चाँदीको भाउ पनि घट्यो
काठमाण्डौ । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ ओरालो लागेको...
फेरि उकालो लाग्दै सुनको भाउ, आजै तोलामा रु. ९०० बढ्यो
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार पनि सुनको भाउ उकालो...
सुनको भाउ रु. ९० हजार नजिक, आज तोलामै रु. १ हजार बढ्यो
काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज बिहीबार तोलामै १ हजार रुपैयाँले उकालो...
सुनको भाउ थोरै बढ्यो, चाँदी स्थिर
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको भाउ थोरै बढेको छ। नेपाल...